“Aguero iyo Messi waa wadajir wanaagsan”. – Gool FM
“Aguero iyo Messi waa wadajir wanaagsan”.
Kaafi November 12, 2017
(Moscow) 12 Nof 2017. Tababbaraha Argentina waxa uu amaanay isfahanka garoonka dhexdiisa e u dhexeeya Lionel Messi iyo Sergio Aguero kaddib markii ay ka soo dhalaaleen kulankii Russia.
Aguero oo markii ugu horreeysay u safanayey La Albiceleste tan iyo 2016 ayaa shabaqa la helay laan jan jeerkii Cristian Pavon taas oo sahashay in xulkiisa 1-0 ku badisay ciyaarta ka dhacday Luzhniki Stadium.
Messi waxa uu ka dheelayey gadaasha Aguero isaga oo ku lug lahaa dhismihii golkaas xilliga dambe yimi – weeraryahanka City waxa uu noqday xiddigga saddexaad ee ugu goolasha badan Argentina waxa ayna isku tiro yihiin Hernan Crespo.
“Tani waa waxa aan rabno. Kubadda badan oo toos ah ayaa ka jiray docda Angel di Maria iy Alejandro Gomez,dhaq dhaqaaq xiiso leh ayaa u dhexeeyey Aguero iyo Messi,dhaq dhaqaaq badan oo garbaha ah,’ ayuu Sampoali u sheegay wariyeyaasha.
“Aguero waxa uu aqrinayey oo uu aad u fahmayey boosaska qaar. Dhowr laad ayuu qeytii hore riday iyo saddex kale qeybtii dambe, mid ka mida waxa uu ahaa gool.”
Coutinho waa taam buuxa kulanka Brazil Vs. England